Ny beta farany an'ny Snort 3, rafi-pitsikilovana fidirana tambajotra dia efa navotsotra | Avy amin'ny Linux
Ny beta farany an'ny Snort 3, rafi-pitsikilovana fidirana tambajotra dia efa navotsotra
ny Ny mpamorona Cisco dia namoaka ny kinova beta farany rafitra fisorohana fidirana an-tsokosoko "Snort 3" izay nohavaozina tanteraka, satria ho an'ity kinova vaovao ity dia niasa tamin'ny famolavolana tanteraka ny mpamorona sy nohavaozina ny maritrano.
Anisan'ireo faritra nantitranterina Nandritra ny fanomanana ny kinova vaovao, ny fanatsorana sy fanombohana notsorina ny fangatahana, automatique configuration, ny fanatsorana ny fiteny fananganana fitsipika, ny fitiliana mandeha ho azy ny protokol rehetra, ny fanomezana akorandriaka ho an'ny fitantanan-draharahan'ny baiko, ny fampiasana mavitrika ny multithreading miaraka amin'ny fidirana iraisan'ny mpikarakara samy hafa ho an'ny fikirakira tokana.
1 Momba an'i Snort
2 Asongadin'ny beta farany Snort 3
Momba an'i Snort
Ho an'ireo tsy mahalala an'i Snort, tokony ho fantatrao izany eIty dia rafi-pitsikilovana fidirana an-tamba-jotra, maimaim-poana sy maimaim-poana. Manolotra ny fahaizana mitahiry hazo ao anaty rakitra an-tsoratra sy any amin'ireo tahiry sokafy, toy ny MySQL. Izy io dia mampihatra ny doka fanafihana sy ny maotera fitiliana seranan-tsambo izay mamela ny fisoratana anarana, ny fanairana ary ny famaliana ireo anomaly efa voafaritra teo aloha.
Mandritra ny fametrahana azy, manome sivana na fitsipika an-jatony ho an'ny varavarana ambadika, DDoS, rantsantanana, FTP, fanafihana an-tranonkala, CGI, Nmap, ankoatry ny hafa.
Izy io dia afaka miasa ho toy ny log sniffer sy packet. Rehefa fonosana mifanandrify amin'ny lamina napetraka ao amin'ny lalàm-panorenan-dàlana, dia tafiditra ao izy. Izany no ahafantaranao hoe oviana, taiza ary ahoana no nisehoan'ny fanafihana.
Snort dia manana tahiry fanafihana izay havaozina tsy tapaka amin'ny alàlan'ny Internet. Ny mpampiasa dia afaka mamorona sonia mifototra amin'ny toetra mampiavaka ny fanafihana tambajotra vaovao ary mandefa izany any amin'ny lisitry ny mailaka sonia an'i Snort, ity etika fiarahamonina sy fizarana ity dia nahatonga an'i Snort ho iray amin'ireo IDS malaza indrindra, havaozina ary tambajotra malaza indrindra. matanjaka.
Asongadin'ny beta farany Snort 3
Amin'ity beta farany ity, Snort dia mampiditra tetezamita amin'ny rafitra fikirakirana vaovao izay manolotra syntax notsorina ary mamela ny fampiasana script ho an'ny fananganana configurement dynamique. LuaJIT dia ampiasaina hanodinana rakitra fisie. Ny plugins mifototra amin'ny LuaJIT dia omena amin'ny fampiharana safidy fanampiny ho an'ny fitsipika sy rafitra fisoratana anarana;
Ny motera mamantatra ny fanafihana dia nohavaozina, nohavaozina ny lalàna, Ny fahaizana mamatotra buffer amin'ny fitsipika (buffer raikitra) dia nampiana. Ny motera fikarohana Hyperscan dia tafiditra ao, mamela anao hampiasa lamina nipoitra haingana sy marina kokoa mifototra amin'ny fitenenana matetika ao amin'ny lalànanao;
Nisy fomba fanadihadiana vaovao nampiana ho an'ny HTTP, mandray an-tanana ny faran'ny fotoam-pivoriana ary mandrakotra ny 99% amin'ireo toe-javatra tohanan'ny andrana fitsapana HTTP Evader. Ny kaody dia novolavolaina hanohanana ny HTTP / 2.
Ny fahombiazan'ny fomba fanaraha-maso fonosana lalina dia nitombo be. Nampidirina ny fahafaha-manao fanodinana valizy marobe, ahafahan'ny fanatanterahana ny kofehy marobe miaraka amina mpikirakira fonosana ary manome fitombenana miorina amin'ny isan'ny cores CPU.
Repository iraisan'ny latabatra fanaingoana sy toetran-toetra no nampiharina, izay zaraina amin'ny rafi-pitantanana samihafa, izay ahafahana mampihena be ny fahatsiarovan-tena amin'ny alàlan'ny fanafoanana ny famerenana ny fampahalalana;
Ho fanampin'izay, a nrafitra fisoratana anarana hetsika vaovao izay mampiasa ny endrika JSON ary mifangaro mora foana amin'ny sehatra ivelany toa ny Elastic Stack.
ihany koa misongadina ny fifindrana mankany amin'ny maritrano maodely, ny fahaizana manitatra ny fampiasa amin'ny alàlan'ny fifandraisana plug-in sy ny fampiharana ireo zanadrafitra fototra amin'ny endrika plug-in azo soloina.
Amin'izao fotoana izao, Snort 3 dia efa nampiditra plugins an-jatony izay manarona sehatr'asa isan-karazany, ohatra, ahafahanao manampy ny codecs anao, ny mode introspection, ny fomba fisoratana anarana, ny hetsika ary ny safidinao amin'ny fitsipika, ankoatry ny fitiliana mandeha ho azy ny serivisy mihodina, manala ny filana mamaritra manokana ny seranan-tseraseran'ny tambajotra miasa.
Finalmente raha te hahafantatra bebe kokoa momba izany ianao na andramo ity beta ity dia azonao atao ny manamarina ny antsipiriany ao amin'ny rohy manaraka
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Ny beta farany an'ny Snort 3, rafi-pitsikilovana fidirana tambajotra dia efa navotsotra
Distrochooser: Ilay tranonkala manampy anao hisafidy ny GNU / Linux Distro mety
Docker Hub: Mianatra bebe kokoa momba ny teknolojia Docker